पहिलो खेप स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री आइपुग्यो- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
पहिलो खेप स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री आइपुग्यो
१०० थर्मामिटर मागेकोमा जम्मा १० वटा आए
चैत्र १७, २०७६ चित्रांग थापा
धनगढी — कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चीनबाट ल्याएको विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि पहिलो खेप सोमबार धनगढी आइपुगेको छ । नेपाली सेनाको स्काइ ट्रकबाट ती सामग्री धनगढीको गेटा विमानस्थलमा ल्याइएको हो ।
सुदूपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रमुख क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले प्रदेशका ९ वटै जिल्लाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी पहिलो खेपमा सामग्री आइपुगेको बताए ।
‘अहिले प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरु कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताका सामग्री हुन्,’ उनले भने । माग गरेअनुसारको मात्रामा सामाग्री भने नआएको उनले बताए । ‘थप सामग्री छिटै आपूर्ति हुने स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आश्वासन प्रप्त भएको छ,’ उनले भने ।
डा. अवस्थीका अनुसार सोमबार प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरुमा गाउन, एन ९५ मास्क, सर्जिकल मास्क, थर्मोमिटर र ग्लब्स छन् । ‘प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पुग्नेगरी १ सय थर्मोमिटर माग गरेका थियौं,’ डा. अवस्थीले भने, ‘१० वटा मात्र आयो, त्यस्तै गाउन १ हजार ३० थान, एन ९५ मास्क ९ सय ६० थान, ग्लब्स २० हजार थान र सर्जिकल मास्क १० हजार थान रहेको छ ।’
डा. अवस्थीले सुदूरपश्चिमबाट माग गरे बमोजिमको संख्यामा सामग्री आइनपुगेको भए पनि प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । उनले कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका रहेकाहरुको स्वाब परीक्षणका लागि धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पिसिआर मेसिन खरिद प्रकृया सुरु भएको जानकारी दिए । ‘यस्तै चीनबाट आएका ४ वटा पिसिआर मेसिनमध्ये एउटा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उपलव्ध गराइने स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आश्वासन दिइएको छ,’ डा. अवस्थीले भने ।
सोमबार आइपुगेका सामग्रीहरु बुधबारदेखि सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्‍याउने तयारी सुरु भएको डा. अवस्थीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७६ १८:४०
टोकियो ओलम्पिक्सको नयाँ मिति तय
चैत्र १७, २०७६ एजेन्सी
टोकियो — टोकियो ओलम्पिक्स अब सन् २०२१ को जुलाई २३ बाट सुरु भएर अगस्ट ८ मा समापन हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण टोकियो ओलम्पिक्स एक वर्ष पछाडि सारिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक्स कमिटी (आईओसी) को सोमबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । एक वर्षपछि आयोजना भए पनि प्रतियोगिताको नाम भने टोकियो ओलम्पिक्स २०२० नै रहनेछ ।
अब प्यारा ओलम्पिक्स भने सन् २०२१ को अगस्टे २४ देखि सेप्टेम्बर ५ सम्म हुनेछ । आईओसी अध्यक्ष थोमस बाखले नयाँ मितिमा ओलम्पिक्स आयोजना गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने बताउँदै यसमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पोखेका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७६ १८:३८
गड्डाचौकी नाकाबाट सोमबार साढे १३ सय भित्रिए
आमाबुवासँगै भारतबाट आएका ११ महिने बालक संक्रमित
व्यवस्थापकीय कमजोरीले सुदूरपश्चिममा बढ्दो जोखिम
अर्जुन शाह, वसन्तप्रताप सिंह
सेनाको प्राविधिक सहयोगमा अस्थायी क्‍वारेन्टाइन निर्माण
डोटीमा सुत्केरीको मृत्यु